IINDIDI EZAHLUKENEYO ZEBHEDI (IMIFANEKISO YEZITAYILE ZESAKHELO SEBHEDI) - IFANITSHALA
Eyona Ifanitshala Iindidi ezahlukeneyo zeBhedi (Imifanekiso yeZitayile zesakhelo seBhedi)
Zininzi iindidi zeebhedi kwaye ukukhetha eyona ilungileyo sisigqibo esibalulekileyo. Indawo yokuphumla, indawo yokuphumla kunye nokulala ebusuku ngoxolo-yile nto igumbi lokulala elifanelekileyo uninzi lwethu. Ke, kukho umgudu omninzi obekiweyo ekwenzeni igumbi lokulala libe yindawo yokuthuthuzela noxolo. Ukuba yindawo ekugxilwe kuyo onke amagumbi okulala, kungokwemvelo ukuba siqale ukuhombisa amagumbi ethu okulala ngokukhetha uhlobo olufanelekileyo lwesakhelo sebhedi. Ukusuka kwiibhedi zemveli ezimbejembeje ukuya kwiPhondo laseFrance, okanye eziqhelekileyo, kukho iintlobo ezininzi zezakhelo zokukhetha.
Iibhedi mhlawumbi yeyona fanitshala inkulu kwigumbi lakho lokulala kunye notyalo-mali olukhulu ke kubalulekile ukuba uqiniseke ukuba ikunika okona kulungileyo kunye nokuphumla. Ngapha koko, abantu abaninzi bezibandakanya ngakumbi kwigumbi lokuhombisa kunye nangaphakathi, zininzi iindlela zokuqwalaselwa ngelixa ukhetha isakhelo sebhedi. Apha ngezantsi sisikhokelo kwiindidi ezahlukeneyo zeefreyimu zebhedi kunye neenzuzo kunye neengxaki zazo:
Iinkonzo kunye neengozi zeBhedi yeQonga
Iinkonzo kunye neCons of Sleigh Beds
Iiposta ezine zebhedi
Iinkonzo kunye neengozi zeBhedi yokuPakisha
Iinkonzo kunye neengozi zeebhedi zeCanopy
Iinkonzo kunye neengozi zoGcino lweeBhedi
Iinkonzo kunye neengozi zeebhedi zeentsuku
Iinkonzo kunye neCons of Trundle Beds
Iinkonzo kunye neengozi zeebhedi zeBunk
Isakhelo seBhedi yeSinyithi esiQinisekisiweyo
Iinkonzo kunye neengozi zeSakhelo seBhedi esiQinisekisiweyo
Isakhelo seBhedi ejikelezileyo
Iinkonzo kunye neengozi zesakhelo esijikeleze ibhedi
Iinkonzo kunye neengozi zebhedi yamanzi
Iinkonzo kunye neengozi zebhedi yaseFransi
Ibhedi yeqonga ihlala inikezela ngeprofayile esezantsi kunye nesiseko indawo yasimahla yokuphumla. Ngokungafaniyo nesakhelo sebhedi yemveli, iibhedi zeqonga azidingi isiseko sebhokisi yasentwasahlobo, enokukugcinela imali eninzi. Unako ukutyala imali ekuthengeni imatrasi ekumgangatho ophezulu kwibhedi yakho yeqonga ukuze ufumane intuthuzelo enkulu ngelixa ulele. Kwakhona, isiseko sayo esisikiweyo siqinisekisa ukuba kukho ukujikeleza komoya okuninzi, okunokunceda ukuthintela umatrasi ochaphazeleka kukungunda kunye nokuvunda.
Oku kunokuthetha ukuba, umatrasi wakho uya kuhlala upholile ngokwendalo. Ngenxa yobume bayo obuqinileyo, lonke uhlobo lomatrasi lusebenza kakuhle kwibhedi yeqonga, nangona kunjalo umatrasi wememori uyinto efanelekileyo. Iibhedi zeplatifomu zihlala zenziwe ngezinto ezilula kunye nezincinci zoyilo. Isiseko sayo esisezantsi, esiyeyona nto ihluke ngaso, siyenza ithandwe kakhulu ngabantu abathanda imihlobiso yasekhaya.
Ngaba iibhedi ezineeslats zifuna ibhokisi yasentwasahlobo? Uninzi lweebhedi zifuna ibhokisi yasentwasahlobo ukugcina umatrasi ungadibani kunye nokunika ukuphakama kwebhedi ukunceda umntu ukuba angene aphume. Nangona kunjalo, iibhedi zeqonga zinee-slats ezibonelela ngenkxaso kumatrasi ngaphandle kwesidingo sebhokisi yasentwasahlobo. Naluphi na uhlobo lomatrasi lunokusetyenziswa kunye nebhedi yeqonga kubandakanya umqamelo, iikhoyili, iLatex okanye igwebu.
Iimodeli ezininzi zebhedi yeqonga ziphakamile ngokwaneleyo phantsi kweedrowa zokugcina ibhedi. Oku kunokuba luncedo ekugcineni iimpahla zonyaka okanye imigca enjengokulala okanye iingubo zokugcina. Enye into enomdla enokufunyanwa ngumbhede weqonga owakhiwe kwindawo yokulala. Oku kuluncedo ngakumbi njengebhedi eyongezelelweyo yeendwendwe.
Ngokubonakala kwayo okungafaniyo, iibhedi zeplatifomu zinegalelo kusisihombiso simahla nesicocekileyo. Ke kubo bonke abo bathanda uyilo lwefenitshala ecikizekileyo kunye neyala maxesha, ibhedi yeqonga lukhetho olufanelekileyo. Uninzi lweebhedi ezintsha zeqonga ziphefumlelwe uyilo lwe-zen lwe-Asia kwigumbi lokuhombisa elingaphantsi kwaye lihle.
Ibhedi yeqonga ebekiweyo-Wayfair
+ Iindleko ezingaphantsi kwebhokisi esemgangathweni yebhokisi yasentwasahlobo
+ Ayifuni ibhokisi yasentwasahlobo yenkxaso
+ Inganikezela ngendawo yokugcina eyongezelelweyo kwisakhelo
-Ngaphandle kwebhokisi yasentwasahlobo umatrasi unokuqina okanye wonakalise ixesha
Ukuba kukho isakhelo sebhedi esihlasela isitayile esinexabiso kunye nenqaku, sisilili sokulala. Iibhedi ezirholayo ziza nebhodi yentloko egobileyo yangaphandle kunye nebhodi yeenyawo, efana nehashe ihashe. Ngoyilo olunesibindi, ibhedi ebhedayo ngokulula iba yindawo esembindini wegumbi ngalinye lokulala. Iibhedi ezirholayo ziza kwizinto ezahlukeneyo, izimbo kunye nobukhulu.
Okwangoku xa sibona ngeso lengqondo umandlalo wokulala, sibona ibhedi enkulu eyenziwe ngomthi enomfanekiso ocacileyo. Umandlalo wokulala kwisimo sawo sokuqala uza ngamawele, ukumkanikazi kunye nobukhulu bokumkani, ubukhulu becala benziwe ngomthi. Nangona kunjalo, uninzi lweebhedi zeesleigh ezikhoyo ziyafumaneka kubukhulu benkosi.
Ngelixa izinto ezininzi zahlukile kwizinto ezikhoyo, isilili ebhedini iyathandwa kwaye iyacetyiswa kwifom yayo. Ubuhle bebhedi ebukhali ngokuqinisekileyo bongeza into ekhethekileyo kuyo nayiphi na indawo egcinwe kuyo. Ukusuka kumthi omnyama we-mahogany ukuya kumthi we-oki okhanyayo, iibhedi ze-sleigh zingenziwa kwiitoni ezahlukeneyo zemibala ukuze zilungele ukuhonjiswa kwegumbi lakho lokulala.
Cherry iinkuni ebhedini
+ Umtsalane kwaye wenza isiqwenga esikhulu
+ Iibhedi zesleigh zihlala zithengiswa ngeseti efanayo (Ilungele uyilo lokulala oluhambelanayo)
- Iibhedi zokulala zingabiza kakhulu kunezinye iintlobo
-Ngenxa yesayizi yazo enkulu (inkosi) banokuthatha indawo enkulu yokulala
Ibhedi eneeposta ezine, njengoko igama libonisa, iza neepowusta kumacala omane eebhedi. Uyilo lweebhedi ezine lweposta lunomtsalane weklasikhi kuwo onokwenza ukuba igumbi lizive linobungangamsha kwaye liyimimangaliso. Zininzi iindlela ezahlukeneyo onokukhetha kuzo kubandakanya izakhelo zebhedi ezenziwe ngomthi nangesinyithi.
Ezi ntlobo zeebhedi bezikho ukusukela kwiinkulungwane zokuqala kwaye ziye zathandwa kulwakhiwo lwazo. Inkulu ngobukhulu kwaye yahlukile ngemilo, ibhedi yeposta ezine lukhetho olufanelekileyo kubo bonke abo banqwenela ukubetha ingxelo ngombhede. Iibhedi ezininzi ezine zeepowusta ziza nombhobho onokuthi unxitywe ngemigca ukufezekisa imeko yothando.
+ Ijongeka intle kwaye inobungangamsha
+ Iimodeli ezixhotyiswe ngamakhethini zinokunceda ukugcina ukukhanya kwelanga
Iikheropi zinokuqokelela uthuli olufuna ukucocwa ngeveki
- Iibhedi ezine zeposta zinzima kwaye kunokuba nzima ukuzithatha
Isakhelo sebhedi sophahla siyafana nebhedi eneeposta ezine. Kwisakhelo somandlalo wombhede, iiposta ezinyukayo zidityaniswe ngemiqadi yokuwela ukuze ibonakale idityanisiwe. Isakhelo sebhedi sigqunywe ngelaphu kumacala agubungele ibhedi kuwo onke amacala. Kolu hlobo lwesakhelo sebhedi, elinye inqanaba lesilingi lenziwe ngaphezulu kwebhedi. Imizobo kunye neepowusta ezigubungele isakhelo sebhedi inika isibheno esiphuphayo. Iibhedi ezinophahla zihlala zisetyenziswa kwigumbi lokulala labantwana nakwamagumbi okulala aphezulu apho ufuna ukwenza ibhedi ibe yindawo ekugxilwe kuyo.
Ngesibheno sayo sentsomi, ukhuko lombhede ngokuqinisekileyo lolunye lweentlobo ezithandwayo zezakhelo zebhedi. Iibhedi ezinophahla ezikhulu ngobukhulu kunye nolwakhiwo zifuna ukuzibophelela okukhulu. Lixesha lotyalo-mali ixesha elide kwaye ngokuqinisekileyo lifuna ukhathalelo oluninzi kunye nokuqwalaselwa ukugcina inkangeleko kunye nokuziva kwayo. Kodwa ngaphezu kwayo yonke le nto, akukho nto iyayoyisayo into yokuba ukuba nombhede onophahla liphupha elizalisekayo kubathandi abaninzi bemihombiso yasekhaya.
+ Kwabo baneefestile ezinkulu ezinokukhanya okuqaqambileyo kwendalo ibhedi yomgqomo exhotyiswe ngamakhethini amakhulu inokunceda ukugcina ukukhanya kwelanga kwaye ikuvumele ulale.
+ Umnatha osisitheliso ukwasetyenziswa kwiindawo ezininzi zehlabathi ukuthintela izinambuzane ezinje ngeengcongconi.
-Amakhethini oophahla anokuqokelela uthuli kwaye kufuneka acocwe veki nganye
- Ngamana unokwenza igumbi lokulala elincinci elinophahla olusezantsi luzive luxinene
Akukho sixa sokugcina ‘sikhulu kakhulu’. Ke ukufumana indawo yokugcina eyongezelelweyo ebhedini ngokucacileyo yinto uninzi lwethu olonwabisayo ngayo. Iibhedi zokugcina iibhedi zesintu ezinamandla okugcina, kungoko zitshiphu ngokuthelekiswa kuneentlobo zebhedi eqhelekileyo. Ihlala yenziwa ukulungiselela indawo yokugcina ngaphakathi kwesakhelo sebhedi.
Enye yeenzuzo zesakhelo sokugcina ibhedi kukuba isebenzisa ngokufanelekileyo indawo ekhoyo. Awusebenzisi ibhedi yakho kuphela ukuphumla kodwa kunye nokugcina izinto ezibalulekileyo. Indawo yokugcina kwiibhedi ezinjalo iqinisekisa ukuba igumbi lakho lihlala licocekile kwaye licocekile kungekho kungqubana okungafunekiyo okuleleyo. Iibhedi zokugcina ziyafumaneka ngobukhulu obahlukeneyo kunye neemilo ezenza ukuba umnini-ndlu azikhethe ngokokuhonjiswa kwendlu.
Ibhedi yeqonga lokugcina
+ Indawo efanelekileyo yokugcina izinto ezinendawo yokugcina eyakhelweyo
+ Isibheno esibonakalayo esinokutshatiswa noyilo olulodwa
- Iibhedi zokugcina zinokuba nexabiso eliphezulu
- Kunzima ukudibanisa, ukuhlafuna kunye nokuhamba
Iibhedi zasemini zisetyenziswa kakhulu kumagumbi okugcina okanye kwiiofisi zekhaya zokulala okanye ukungqengqa emini. Iibhedi zosuku ziza nezinto ezahlukeneyo ezenziwayo ezenza ukuba ibe yenye yezona ndawo zithandwayo zokulala ezisetyenziswayo. Ukuba igumbi lakho lokulala alinandawo, iibhedi zasemini zezona zikhetho zibalaseleyo. Zifutshane kwaye ziyifezekisa injongo ngokufanelekileyo. Banenkxaso kumacala amathathu ebenza babalungele abo bafuna indawo yokulala kunye nokuhlala, ukufunda okanye ukufunda. Ukuba usebenzisa iibhedi zasemini kwigumbi lokuhlala, zinokuba yindawo efanelekileyo yokuphumla emini okanye uhlale phantsi ubukele umboniso wakho kamabonwakude owuthandayo.
Umbuzo obuzwa rhoqo ngulo, mkhulu kangakanani umandlalo wosuku? Owona mlinganiso uqhelekileyo webhedi yosuku usebenzisa umatrasi wamawele ongama-39 ububanzi kunye no-75 ″ ubude. Omnye umbuzo othandwayo ngulo, yintoni umahluko phakathi kwebhedi yosuku kunye nefuton? Ibhedi yosuku ineematrasi zayo ezimbini zokulala ngelixa umatrasi we-futon usongelwe ukuguqula ukusuka ebhedini uye kwisofa. Ngesi sizathu umandlalo we-futon uhlala uthathwa njengonqabile ukulala kuwo, ngelixa umatrasi ophakamileyo wamawele unokubonelela ngokulala kamnandi ebusuku.
Ukuba awunagumbi leendwendwe elahlukileyo, iibhedi zosuku zilungile ukongeza iindawo zokulala ezingakumbi kwiindwendwe zakho. Kwakhona, beza nezinto ezininzi onokukhetha kuzo, ezitshintsha inkangeleko yazo xa kufuneka njalo. Iibhedi ezininzi zemihla ngemihla ziza nombhede ongaphantsi kwesibambiso olungele abo bafuna ibhedi eyahlukileyo kubahlobo okanye yosapho.
Ibhedi yasemini ene trundle
+ Iibhedi zasemini zinokudlula njengesofa kwabo banesicwangciso somgangatho esincinci
+ Iibhedi ezininzi zosuku zinemizila esecaleni okanye iindawo zokubeka iingalo ukuze uhlale ngokukhululekileyo kuzo
+ Iindidi ezininzi zibonelela ngokugcina ngaphantsi kwebhedi
-Ngenxa yoyilo lwamacala amathathu inokufuna udonga lwangasemva oluxhasayo oluqhuba ubude bebhedi
Iibhedi zomthi ziyafana neebhedi zasemini. Umandlalo wosuku uya kuba nedrawer eyongezelelweyo, ethi xa ikhutshiwe isebenzise indawo eyongezelelweyo yokulala. Akufuneki ukuba kuthethwe, iibhedi ezixubileyo zilungele ukwandisa ukusetyenziswa kwesithuba esincinci. Iibhedi ezixineneyo aziboneleli kuphela ngendawo eyongezelelweyo yokulala kodwa zinokusetyenziswa njengemibhede yosuku xa ingafuneki.
Undwendwe olungalindelekanga lunokulungiselelwa ngokulula xa unebhedi eyenzelwe ukuhamba ukongeza indawo yokulala eyongezelelweyo. Ngokusisiseko uyilo luvumela ibhedi yesibini esezantsi enamavili ukuba ityibilike phantsi kwebhedi ephambili xa ingasetyenziswa.
Isitya sebhedi yensimbi
+ Iibhedi ezimbini kumkhondo wonyawo omnye
+ Iindidi ezininzi zinendawo yokugcina ebhedini
+ Kukhuselekile ebantwaneni kunebhedi ebhedini ephezulu
Umandlalo webhedi yesibini incinci kuneyokuqala efuna umatrasi okhethekileyo kunye namashiti
-Mayibe yinto engathandekiyo ukukhupha umatrasi ongezantsi
Esinye isakhelo sebhedi esithandwayo ziibhedi zebhedi. Olu hlobo lwesakhelo sebhedi luhlala luneebhedi ezimbini okanye ezingaphezulu embekweni ngaphezulu komnye. Iibhedi zebhedi zihlala zineleli eqhotyoshelweyo kwaye zisetyenziswa kakhulu kwigumbi labantwana. Ukuba ujonge ukhetho lokonga indawo kwigumbi lomntwana wakho, ke iibhedi zebhedi zezona zikhethekileyo. Olu hlobo lwesakhelo sebhedi likuvumela ukuba ube nendawo yokulala ezimbini ukuya kwezintathu endaweni yenye, ngokuthe nkqo ubeka iibhedi enye ngaphezulu kwenye. Iibhedi zebunk azisebenzisi kuphela indawo efanelekileyo ngokufanelekileyo kodwa ziyonwabisa abantwana.
Ukuthenga isakhelo sebhedi elungileyo sisigqibo esicingisiswe kakuhle kwaye kunokuba kukuzibophelela okukhulu. Ngoku uyazi iintlobo ezahlukeneyo zezakhelo zebhedi kunokuba lula kuwe ukuba uthathe isigqibo esifanelekileyo. Uhlobo ngalunye lwesakhelo sebhedi luza nezibonelelo zalo kunye nezinto ezingalunganga. Inyathelo lokuqala elithathiweyo ekuthengeni isakhelo sebhedi kukuqonda ubungakanani bendawo ekhoyo.
Ungakanani indawo onokuyinikezela ebhedini? Ngaba ungafuna ibhedi yobukhulu bohlobo okanye ibhedi yesayizi enkulu? Ukuba ujonge ukhetho lokonga indawo ke khetha iifreyimu zebhedi ezithatha indawo encinci kodwa zibonelele ngokusebenza ngakumbi. Into yesibini ebaluleke kakhulu ekufuneka ithathelwe ingqalelo ngelixa uthenga isakhelo sebhedi sisixhobo sayo.
Iwele ngaphezulu kwewele ibhedi ebhedi
+ Iibhedi ezahlukileyo zokulala abantwana abaninzi
+ Ibhedi ebhedini ibonelela ngendawo kwigumbi lokulala elincinci
+ Abantwana bathanda iibhedi zebhedi kwaye ibanika enye indawo yokulala, yokufunda okanye yokufunda
- Iibhedi eziphezulu zebhedi zinokubangela ukonzakala ekuweni
- Kunzima ngakumbi ukwenza ukhuko
-Ukuvuka nokuhla kwileli kunokuba ngumceli mngeni ebusuku
Isakhelo sebhedi esiqinileyo somthi sinokugubungela iintlobo ezininzi ezahlukeneyo. Izitayile zebhedi yesiqhelo zinokubandakanya i-canopy, iposta ezine, umvavanyi wesiqingatha, iqonga, isileyi okanye iindlela ezahlukeneyo.
Ngokwesiqhelo kucingelwa njengesandla esenziwe ngebhedi ngomthi kunye neepropathi ze-nostalgic kunye nesitayile se-rustic. Nangona kunjalo, kule mihla isakhelo sebhedi somthi sinokwenziwa ngokwesiko kwizinto zakho ezichanekileyo ukuze ufumane imbonakalo echanekileyo oyifunayo. Iimodeli ezininzi zibonelela ngesixa esikhulu segumbi elingaphantsi kwendawo yokugcina ibhedi.
Ibhedi yeplanga eqinileyo
+ Izakhelo zebhedi zomthi zomelele kwaye zinokuhlala ubomi bonke
+ Kuncinci amathuba okuba i-creak kuneebhedi zesinyithi
+ Umthi wendalo ubonelela ngobutyebi kunye nokufudumala kwigumbi lokulala
-Iiplanga zebhedi eziqinileyo zinokuba nzima kwaye kunzima ukuhamba
Kulabo bajonge ukwenza uluvo kwaye basuke kwibhedi eqhelekileyo yoxande, kukho ibhedi ejikelezileyo okanye yesangqa. Umbhede ojikelezileyo ngokuqinisekileyo uyintsusa kwaye unokusetyenziselwa iindlela ezininzi zoyilo ezinje ngezangoku, zangoku neze siko. Ngokweengcali zengqondo imilo ejikelezileyo inokunceda umntu ukuba azive ekhuselekile kwaye ekhululekile.
Abantu abaninzi bayayithanda ibhedi ejikelezileyo kuba banokulala kuyo bajonge kulo naliphi na icala. Olunye uphawu olunomtsalane kwiimodeli ezininzi zibonelela ngendawo yokugcina engaphantsi enokuba luncedo olukhulu ekugcineni ibhedi eyongezelelweyo. Kwaye oko kusizisa kwezokulala ngokwenyani, njengoko kunokuba nzima ukufumana imigca elingana neebhedi ubukhulu obungaqhelekanga. Ngaphaya koko, ukufumana indawo efanelekileyo yebhedi ejikelezileyo kwigumbi lokulala kunokuba ngumceli mngeni kwabo baneendawo ezincinci. Nangona kunjalo, akukho nto inokuphika kwabo bafuna ukubonisa isitayile sabo esahlukileyo ibhedi ejikelezayo inokuhambisa.
Ibhedi emhlophe yesikhumba emhlophe - Imvelaphi
+ Iibhedi ezijikelezileyo zingabonisa isitayile sakho esahlukileyo
+ Unokulala nakwesiphi na isikhundla
-Ingabanzima ukubeka indawo encinci kwigumbi lokulala
-Kunokuba nzima ukufumana iiseti ezifanelekileyo zokulala
Ibhedi yamanzi yakhiwe ngokweendidi ezimbini. Isakhelo esinecala elinomgangatho weplywood enomatrasi okhethekileyo oqukethe amanzi. Kukwakho neebhedi zamanzi ezithambileyo ezisemacaleni ezinesakhelo sogwebu kunye nomatrasi ogcwaliswe ngamanzi owenzelwe ukuba ulingane kwisakhelo sesinyithi kwaye ujongeka njengebhedi eqhelekileyo.
Iibhedi zamanzi ngokubanzi zakhiwe ngezinto ezithambileyo zePVC kwaye phezu kokugqobhoza kunokulungiswa ngekhithi yokulungisa i-vinyl. Iibhedi zamanzi zinokufudunyezwa nge-thermostat elawula ubushushu. Iqondo lobushushu linokusetwa kukhetho lwakho lobuqu uninzi lukhetha ukugcina kufutshane nobushushu besikhumba obuyi-30 ° C okanye i-86 ° F.
Ibhedi ethambileyo yamanzi eneentsimbi zegwebu
+ Amanzi anokufudunyezwa kwiqondo lakho lobushushu olifunayo ukuze ulale ebusika ukhululeke ngakumbi
+ Ukuphumla izihlunu zomqolo kwaye kunokunceda kwabo baneengxaki zomqolo
+ Ubomi obude (iibhedi zamanzi zihlala zihlala iminyaka eli-12 okanye ngaphezulu)
-Umbane ukufudumeza ibhedi kuya kukwonyusela imali oyisebenzisayo yenyanga
-Ubungakanani obahlukeneyo ngenxa yemigangatho yamanzi kunokwenza ukuba kube nzima ukugquma ngeebhedi ezimiselweyo
- Inzima kakhulu xa izaliswe ngamanzi kwaye inokuqhekeka xa ugqabhukile
Umbhede wendabuko ufumana ukujija koyilo lwaseFrance kolu hlobo lwebhedi. Iibhedi zaseFransi zinesakhelo sendabuko kodwa yintoni eyenza yahluke kwabanye ngumsebenzi woyilo oluhonjisiweyo. Izakhelo zebhedi zaseFrance ziyaziwa ngeebhloko zazo eziphambili kunye neebhodi zeenyawo. Iipateni ezikroliweyo kunye nomsebenzi wobugcisa ophefumlelweyo uyilo lwesiFrentshi, lwenza ukuba olu hlobo lwesakhelo silungele bonke abo bathanda ukuhonjiswa ngobunewunewu kunye nokuhombisa. Iibhedi zaseFrance ubukhulu becala ngomthi kodwa zinokwenziwa ngentsimbi ebunjiweyo.
Xa uhlala eYurophu umntu uya kuva igama elithi ibhedi yesiFrentshi xa ebhukisha ehotele. Oku kubhekisa kubungakanani bematrasi obuqhele ukuba buncinci kunombhede oqhelekileyo ophindwe kabini kodwa usengaphezulu kwebhedi engamawele. Uninzi e-U.S oluqhele ubungakanani benkosi lufumana umandlalo wasehotele waseFrance umandlalo omncinci kancinci incasa yawo.
Ibhedi yesitayile saseFrance
+ Inkangeleko entle ehambelana nesimbo sePhondo saseFrance
+ I-Headboard ikulungele ukuthembela kuyo
-Ibhodi ephezulu yentloko inokuba bulky
-Ibhodi ephezulu yentloko enokuba nzima ukuyicoca
Zininzi iintlobo zeebhedi ukuhlangabezana nazo zonke iimfuno. Nokuba ibhedi yayo egudileyo okanye ibhedi yokugcina eyenziwe ngeplanga ekumgangatho ophezulu ilungile kwiintsapho ezinokufikelela kwiindleko kwaye zibe nendawo eyaneleyo kumagumbi azo okulala.
Kwelinye icala, kubaqeshi abajonge ukufuduka ukusuka kwenye indawo ukuya kwenye, isakhelo esinye sebhedi asinakuba sisigqibo esifanelekileyo. Eyona nto inokubafanela ngakumbi iya kuba sisakhelo soqoqosho esinokuhanjiswa ngokulula kwaye sigcine nendawo.
Kwangokunjalo, umntu onengxaki yomqolo okanye okhulelweyo ongenakuziva ekhululekile ukugoba ukuze angene ebhedini, akufuneki akhethe ibhedi yeqonga ngenxa yesibheno sayo esibonakalayo. Kubo umbhede ophakamileyo wesiko ulunge ngakumbi. Nje ukuba wenze isigqibo esomeleleyo uqwalasela zonke iinkalo zeemfuno zakho, uya kuba ukulungele ukuthenga uhlobo olufanelekileyo lwesakhelo sebhedi.
Xa ukhetha uhlobo lwebhedi kubalulekile ukuba uqwalasele ubungakanani obufanelekileyo beemfuno zakho. Kukho ubungakanani obahlukeneyo bobukumkani obunjengoKumkani, uKal King, uKumkanikazi, oGcweleyo, iTwin kunye neTwin Xl. Nanku umzobo wolwazi wokukunceda ubone ezona ndawo zokulala zaziwa kakhulu ezikhoyo. Ngolwazi oluthe kratya malunga Ukukhetha ubungakanani beebhedi ndwendwela eli phepha.
ILinenspa 8 Inch Memory Foam kunye ne-Innerspring… $ 99.99$ 129.99 umthengisi ogqibelele (97936) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
I-Zinus Isakhelo se-intshi eyi-intshi eyi-Ibhedi / Hayi… $ 165.98 umthengisi ogqibelele (12150) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
iqhina elimnyama elinxibe ilokhwe yeendwendwe zomtshato
ILinenspa 6-Inch Spring Mattress-Twin $ 205.56 umthengisi ogqibelele (51778) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
ZINUS 10 Inch Ultima Imemori Foam Mattr… $ 290.86 umthengisi ogqibelele (30840) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA Iintengiso zeAmazon
ulunge ngaphezu kwazo zonke ezi zinto
unxibe ntoni emtshatweni wasenkundleni
izibhalo ngothando lukaThixo
Igama lokhuseleko loluntu luyatshintsha emva komtshato
yenyuka ilokhwe yegolide yentsimbi